Iindaba - Zeziphi iimpazamo eziqhelekileyo kunye neendlela zonyango zoomatshini bokucheba i-laser?
Xa usebenzisa i Umatshini wokusika i-laser, iingxaki zihlala zivela ngenxa yexesha elide lokusetyenziswa, indawo yokusebenza enothuli kunye nomgangatho ophantsi wabasebenza. Kufuneka ndenze ntoni xa kukho iingxaki eziqhelekileyo?
Okokuqala, akukho nkqubo yesiqalo esiqhelekileyo:
Ukusebenza ngokungalunganga: isibane esingundoqo seswitshi sokucima umbane sicinyiwe, isibane esingundoqo sebhodi sicinyiwe, indawo yolawulo ayibonisi, isibane sokuqhuba seemoto sicinyiwe, kwaye isandi sokubhuza siyakhutshwa kumatshini.
Unobangela wengxaki: Isisombululo | Ukunxibelelana kakubi kombane ophambili, umbane owonakeleyo we-DC, ukusilela kwephaneli yokulawula, ukusilela kwemoto, ukusilela koomatshini. Umqhubi unokuyisombulula inyathelo ngenyathelo.
1. Ngokubonakalayo jonga izibane zesalathi kumatshini, jonga indawo enesiphene, esona sikhombisi sikhulu sokukhanyisa umbane asikhanyisi, jonga uqhagamshelo lwamandla ombane alulunganga okanye umbane wombane uvuthuziwe, ibhodi ephambili yokukhanya kwe-LED ayikhanyisi okanye Iphaneli yokulawula ayibonisi, nceda ujonge i-DC 5V, Ngaba amandla ombane we-3.3V aqhelekileyo kwaye ukukhanya kwesibonisi somqhubi kucinyiwe? ? Jonga ukuba umbane uqhelekileyo. Xa ujonga ukuba ngaba umbane uqhelekileyo na, nceda unqamle nawuphi na umgca wemveliso ukuvavanya ukujonga ukuba ngaba umbane okanye icandelo lokuhambisa umbane alinasiphene.
2. Jonga ukuba zonke iziboniso ziqhelekile na. Ukuba ungamva u-hum ocacileyo, inokuba kukusilela koomatshini. Jonga ukuba itroli kunye nomqadi ziyatyhalwa ngesandla. Smooth, nokuba kukho imiqobo. Jonga ukuba ikhona enye into ethintelayo.
3. Jonga ukuba imoto shaft yahluliwe na, ukuba ivili lokungqamanisa livulekile na,
4. Jonga ukuba ibhodi ephambili, umbane, iingcingo okanye iiplagi eziqhagamshelwe kwiplagi yebhloko drive (isixhobo) zinxibelelana kakuhle.
5. Jonga ukuba ngaba isinxibelelanisi sentambo esisuka kwibhloko yedrive (idrive) ukuya kwimoto sinqanyuliwe. Ucingo lwe-18-core ukusuka kwibhodi ephambili ukuya kwibhodi encinci lonakele. Nokuba ungayifaka.
6. Jonga ukuba ngaba useto lweparameter luchanekile na. Iiparameter ngasekhohlo ziyafana, kodwa ukuba zahlukile, kufuneka zilungiswe kwaye zibhalelwe umatshini.
2. Akukho mboniso kwiphaneli, kwaye iqhosha alinakwenziwa:
Ingxaki: Isizathu esona sizathu kukuba akukho mboniso kwiphaneli yokuqalisa, kwaye izitshixo azisebenzi kakuhle okanye azisebenzi.
Unobangela wengxaki: unikezelo lwamandla emodyuli yolawulo yokubonisa ayiqhelekanga, uxhulumaniso lolawulo alulunganga, kwaye iphaneli ayilunganga.
1. Qalisa kwakhona umatshini ukujonga ukuba umqadi netroli sele zisetiwe ngendlela yesiqhelo, kwaye akukho manyathelo athathiweyo, kwaye akukho manyathelo athathiweyo ukusombulula isiphoso ekuqaleni.
2. Cinezela iqhosha lokusetha kwakhona amandla, kwaye ucofe amaqhosha okutsala kunye nezitshixo zomsebenzi kwiphaneli yomatshini ukujonga ukuba kuyinto eqhelekileyo na, nokuba la maqhosha anokucwangciswa ngokuzenzekelayo na nokuba kukho nakuphi na ukungaqheleki.
3. Jonga ukuba isokhethi nesihlanganisi esikwisalathisi soqhagamshelo sikhululekile na kwaye asichukumisi.
4. Faka ibhloko yolawulo lokubonisa, jonga ukuba kukho umboniso, nokuba ukukhanya kwesikhombisi kwibhloko yolawulo kuvuliwe, nokuba ngaba umbane uqhelekile na,
5. Buyisela intambo yedata. Ibhodi ephambili ilinganisa ukuba i-P5 iyaphila na kwaye i-voltage yi-5V. Ukuba ayiqhelekanga, nceda ujonge imveliso ye-5V, ukuba akukho mveliso, nceda utshintshele ku-5V.
6. Ukuba kukho umboniso wesikrini kodwa amaqhosha awasebenzi, nceda ubeke endaweni yefilimu iqhosha ukuze ubone ukuba liqhelekile na.
7. Ukuba ayisebenzi, vele ubeke endaweni yebhodi yomama ukuvavanya.